Ny momba an'i Kimberley Diamond Mine any Afrika Atsimo
Fidirana mankany Kimberley
"Ny Big Hole" dia milaza izany rehetra izany. Heinrich van den Berg / Getty
Kimberley, Afrika Atsimo, dia trano fonenan'ny diamondra lehibe indrindra eran-tany, fantatra amin'ny anarana hoe "Big Hole". Lehibe ny olombelona ary lehibe toy izany hita avy eny amin'ny habakabaka, ny lavaka dia namoaka diamondra lehibe indrindra eran-tany ary nanao ny De Beers anarana malaza eran-tany.
Ao amin'ny Kimberley ireo mpitsidika dia afaka mijery sarimihetsika 17 minitra momba ny toerana sy ny tantaran'ny fitrandrahana diamondra any Afrika. Izy ireo ihany koa dia mandeha eny amin'ny sehatra avo iray mba hijery ny Big Hole, mitondra fiara miteraka baomba iray, miditra volontany iray mihidy mba hijery ireo diamondra marina amin'ny loko rehetra, ary mitsidika tranombakoka kely. Tianay manokana ny Baiboly noporofoin'ny mpitrandraka sasany mba handrobana diamondra eo amin'ilay vatosoa hatramin'ny 1883, rehefa nalamina ny fikarohana.
Misy ihany koa ny fivarotana kafe, fanomezana ary fivarotana firavaka, ary maro ireo rafitra sy artifacts sisa tavela tamin'ny fotoana nananan'i Kimberly tanàna fitrandrahana. Ireo mpitsidika dia afaka mandeha eny an-dalambe tsy misy peta-drindrina ao amin'ny tanànan'ny orinasa ary miditra ao amin'ilay trano maotina izay niainan'ny fianakaviana De Beers.
Ireo izay tonga tao amin'ny lamasinina kamiaonan'i Kimberley tamin'ny lamasinina dia nandeha tany The Big Hole tamin'ny alàlan'ny motorcoach, tokony ho folo minitra.
Statistiques de Kimberley Mine
Alaina 15 tapitrisa diamondra no nalaina tao amin'ny Kimberley Diamond Mine, hita tamin'ny taona 1871. Ny famaranana dia nifarana tamin'ny Aogositra 1914.
Ny tanàna teo akaiky dia dwarfed amin'ny fifandraisana amin'ny Big Hole. Louise Murray / robertharding / Getty
Ny halaliny dia: Ny Big Hole dia 215 metatra, na 705 metatra, lalina.
Mapana an'i Kimberley
Ity sarintany ity dia manampy ireo mpitsidika hahatakatra ny toerana ahafahan'izy ireo mijery manodidina ny Big Hole. Anisan'izy ireo ny rafitra niaviana sy noforonina tamin'ny fotoana nandraisan'i Kimberley harena an-kibon'ny tanàna izay nanompo ireo mponina tamin'ny fivarotana sy ny zavatra hafa ilaina.
Nokolokoloina izao, ity dia iray amin'ireo milina ampiasaina mandritra ny fotoam-pialan-tsasatry ny fitrandrahana diamondra ao Kimberley.
Ny rakitsarin'ny Kimberley Diamond dia mitantara ny tantaran'ny fitrandrahana diamondra ary manolotra asa-tanana hatramin'ny fiandohan'ny androany. Mpitsidika marobe no manontany tena raha azo atao ny samples. Tsy izy ireo.
Hahafantatra bebe kokoa momba ny tantaran'ny fitrandrahana diamondra ao amin'ny Wikipedia.
Ny fitadiavana diamondra dia nitondra mpitrandraka fotsiny ary koa mpivarotra ho an'i Kimberly, ary nisy tanàna iray nipoaka tamin'ny fiafaran'ny taonjato fahasivy ambin'ny folo.
Na dia nofoanana aza ny fanandevozana tao amin'ny Cape Colony tamin'ny taona 1834, ny ankamaroan'ireo mpitrandraka dia tsy tsara lavitra noho ireo izay tsy nanana fahalalahana.
Kimberley's Oldest House
Ny marika dia vita printy amin'ny teny Anglisy sy Afrikaans. Susan Breslow Sardone
Araka ny marika hoe: "Nomanina tany Angletera io trano io tamin'ny taona 1877, avy tany amoron-tsiraka nankany amin'ny saha diamondra tamin'ny alàlan'ny ombidia ary natsangana tamin'ny 14 Pneil Rd. Tompon'ny tompony voalohany AJ Petersen."
Johannes De Beer dia Afrikanina izay nahitana diamondra diamondra tany. Nalevina tao Kimberley izy.
Raha vantany dia ampahany manan-danja amin'ny varotra diamondra, io birao tokana io dia nisy diamondra nipetrahana tao Kimberley nividy ary nalefa ampita ho an'ny familiana sy fivarotana.
Ny Banky Standard an'ny British Africa Atsimo dia nanampy tamin'ny fanovana ny sandan'ny diamondra ho vola. Susan Breslow Sardone
Tsy dia nahazo tombontsoa tamin'ny harena an-kibon'ny tanimboly kamboty ny Afrikana Tatsimo; Ny ankamaroan'ny harena dia nalefa ampitan-dranomasina.
Ny diamondra diamondra Kimberley dia nanatsara ny Anglisy Cecil Rhodes, izay nanorina ny Beers. Lasa virtoaly virtoaly ilay orinasa. Niorina tao Rodezia i Rhodes, imperialista ary ny orinasan-dry zareo any Afrika Atsimo, ary misy firenena Afrikana any Zimbabwe sy Zambia ankehitriny.
Ilay Mpanjaka Protea: National Flower Flower Afrika Atsimo
Torolàlana iray hitsidihana ny Robben Islandin'i Afrika Atsimo
Fampidirana any amin'ny Faritr'i Transkei Afrika Atsimo
Sary iray fohy momba ny filohan'i Afrika Atsimo Nelson Mandela
Blyde River Canyon, Afrika Atsimo: The Complete Guide
Toeram-pisakafoanana folo tsara indrindra any Afrika Atsimo
Top 10 Spots ho an'ny fanjonoana ara-panatanjahantena any Amerika Atsimo
Mpanafika Amerikana Idol avy any Caroline Avaratra
Memphis Redbirds 2016
Fantaro ny Canyon Copper ao El Chepe
Misiônan'i San Gabriel
Ny Firefly Studio - Noforoninao ny famoronana anao
Ireo firenena dimy izay miandraikitra an'i Però
Inona no hahaizana momba ny vanim-potoana fisotroana any Meksika
Fahadisoana fahadimy tany amin'ny fitsidihana Grand Canyon
Fiara fitateram-bahoaka any New York